गुगल एनालिटिक्स कोहोर्ट विश्लेषण के हो? तपाईंको विस्तृत गाइड | Martech Zone
गुगल एनालिटिक्सले भर्खर कोहोर्ट विश्लेषण भनेर चिनिने तपाईंको आगन्तुकहरूको ढिलाइ प्रभाव विश्लेषण गर्न एक सुपर कूल सुविधा थप्यो जुन अधिग्रहण मितिको बीटा संस्करण मात्र हो। यो नयाँ थप गर्नु अघि वेबमास्टर्स र अनलाइन विश्लेषकहरूले उनीहरूको वेबसाइटका आगन्तुकहरूको ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया जाँच गर्न सक्षम हुने छैनन्। यो पत्ता लगाउन धेरै गाह्रो भयो कि यदि एक्स आगन्तुकहरूले सोमबार तपाईंको साइट भ्रमण गरे भने उनीहरूमध्ये कति जना अर्को दिन वा भोलिपल्ट भ्रमण गर्थे। गुगलको नयाँ समूह विश्लेषण सुविधा तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को व्यस्तता बढाउन यो डेटा प्राप्त गर्न र विश्लेषण गर्न मद्दत गर्दछ।
"Cohort" के हो?
कोहोर्ट एक शब्द हो जुन एक समान गुणको कारण एकसाथ ब्यान्ड गरिएको व्यक्तिहरूको समूह वर्णन गर्न प्रयोग गरिन्छ। गुगलले "कोहोर्ट" शब्द प्रयोगमा ढिलाइ प्रभाव लाई परिभाषित गर्नका लागि विश्लेषण र प्रयोगकर्ता ब्यवहार विश्लेषण गर्नको लागि अर्को प्रकारको समय-परीक्षण विभाजन सिर्जना गर्नुहोस्। यो सुविधा गुगल एनालिटिक्समा एकीकृत हुनु अघि यो मिति प्राप्तिसम्बन्धी कोहोर्टहरूको विश्लेषण गर्न निकै गाह्रो थियो, तर अब यसलाई प्रयोग गरेर सक्षम गर्न सकिन्छ अनुकूलन चर र घटनाहरू.
Cohort विश्लेषण कसरी प्रयोग गर्ने
तपाईं सजिलैसँग गुगल एनालिटिक्समा तपाईंको बाँया साइडबारमा प्रस्तुत गरिएको श्रोता सेक्सन अन्तर्गत विश्लेषण सुविधा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। एक पटक तपाईले क्लिक गर्नु भएपछि तपाईले एउटा टेबुल पछाडि ग्राफ देख्नुहुनेछ। जबकि टेबल पहिलो नजर मा बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ, चिन्ता नलिनुहोस् किनकि म यसलाई बुझ्न सजिलो बनाउँछु। पूर्वनिर्धारित ग्राफ अन्तिम सात, १ 14, २१, वा days० दिनमा तपाईंको अनौंठो आगन्तुकहरूको औसत प्रतिधारण दर (%) प्रतिनिधित्व गर्दछ।
तलको तालिकामा, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि अप्रिल १, २०१ 1 (तेस्रो प row्क्ति) मा, १2015 अद्वितीय प्रयोगकर्ताहरूले वेबसाइट भ्रमण गरे, जुन दिन ० प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरिनेछ। अब, तेस्रो स्तम्भमा दिन १ हेर्नुहोस् कि कति जना हेर्नुहोस्। १174 दर्शकहरु मध्ये पछि वेबसाइट भ्रमण गरे। अप्रिल २, २०१0मा .1 .२% फर्के र 174.०२% मात्र April अप्रिल,, २०१ visited मा भेटिए। तपाईले चौथो प row्क्तिमा समान check०० अद्वितीय आगन्तुकहरु मध्ये कति जनाले अप्रिल 2rd, अप्रिल th, अप्रिल 2015th मा तपाइँको वेबसाइट भ्रमण गर्नुभयो भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। , र यस्तै।
कुल १,१२1,124 दर्शकहरूको साथ सात दिनको औसत पहिलो प row्क्तिमा देख्न सकिन्छ, जुन शीर्ष ग्राफमा प्रतिनिधित्व हुन्छ।
अहिले सम्ममा मैले यो विश्लेषण धेरै वेबसाइटहरूमा गरेको देखेको छु। मैले यस्तो निष्कर्ष निकालेको छु कि ट्राफिक उत्पादनको लागि खोजी ईन्जिन र्याs्किंग वा कुनै अन्य विशेष च्यानलमा राम्रो प्रदर्शन नगरेका वेबसाइटहरूसँग पनि एकदम कम प्रतिधारण दरहरू छन्। वेबसाइटहरू जसले ब्राण्डलाई मूल्य दिन्छ र अधिक स्थिर ट्राफिक बढि उच्च प्रतिधारण दरहरूमा। यो मेरो आशा छ कि अब तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को अवधारणा दर विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। तर, अर्को प्रश्न यो हो कि यो विश्लेषण कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ? यसको उत्तर यो छ कि यो उत्तम रूपमा वेबसाइटहरू र मोबाइल अनुप्रयोगहरूको विश्लेषणको लागि प्रयोग गरिन्छ।
मोबाइल अनुप्रयोगहरूमा कोहोर्ट विश्लेषण
जनसंख्याको उच्च प्रतिशतले अब इन्टरनेट खोजी गर्न आफ्नो स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट प्रयोग गर्दछ भन्ने तथ्यको कारणले गर्दा, मोबाइल अनुप्रयोगहरू आज पनी बढिरहेका छन्। यसले मोबाइल अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोगकर्ता ब्यवहारको विश्लेषणलाई विकासलाई जारी राख्नको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण बनाउँदछ। यदि तपाइँ आश्चर्यचकित हुनुभयो कि प्रयोगकर्ताहरूले कति लामो तपाइँको मोबाइल अनुप्रयोगसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्, प्रयोगकर्ताहरूले दिनमा कति पटक अनुप्रयोग खोल्दछन्, वा कसरी एप्लिकेसन गर्दछन्, तपाइँ विश्लेषणलाई सञ्चालन गरेर तपाइँका सबै उत्तरहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, तपाईसँग कुञ्जी रणनीति सुधार गर्ने ज्ञान हुन्छ जसले तपाईको कम्पनीको उपस्थिति बढावा दिन्छ।
त्यस्तै, जब तपाईं आफ्नो मोबाइल अनुप्रयोग अपडेट गर्नुहुन्छ, तपाईं दृश्य सुधार गर्न को लागी सक्षम हुनेछ। यदि तपाईंको अवधारण दर कम गर्दछ, तब यसले देखाउँछ कि तपाईंले केहि हराउनु भएको हुन सक्छ र प्रयोगकर्ताहरूले अन्तिम परिणामहरू मन पराउँदैनन्। तपाईं अर्को प्रयोगकर्तालाई अझ राम्रो बनाउनको लागि प्रयोगकर्ताको व्यवहारमा तपाईंको बुझाइ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एक मोबाइल अनुप्रयोगको प्रयोगकर्ता व्यवहारमा कुनै परिवर्तन सजिलै ट्रयाक गर्न सकिन्छ र अधिक संलग्नता तिर आफ्नो अर्को प्रयास ईन्धन गर्न घटाउन।
तल कोहोर्ट विश्लेषणको एक उदाहरण छ जुन application,। ०० साप्ताहिक प्रयोगकर्ताहरूसँग एक मोबाइल अनुप्रयोगमा गरिएको थियो। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, औसत धारणा दर १ मा 8,908२..32.35% थियो, जुन दिन प्रति दिन कम हुन्छ। यस डाटाको साथ तपाईले अनुप्रयोगमा कसरी व्यस्त राख्ने भनेर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ताकि दैनिक प्रयोगकर्ता खोल्ने क्रममा अवधारणा दर बढ्ने हो। एक पटक यो उठ्यो भने, त्यहाँ नयाँ आगन्तुकहरू प्राप्त गर्ने उच्च परिवर्तन हुनेछ मुख प्रचार.
Cohort विश्लेषण रिपोर्ट कन्फिगर
जब तपाईं आफ्नो विश्लेषण गर्न गुगल विश्लेषक खोल्नुहुन्छ, तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ कि रिपोर्ट कोहोर्ट प्रकार, कोहोर्ट आकार, मेट्रिक, र मिति दायराको आधारमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ।
कोहोर्ट प्रकार - वर्तमानमा, बीटा संस्करणले मात्र तपाईंलाई अधिग्रहण मितिमा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ, यसैले तपाईं प्रयोगकर्ताहरूको व्यवहार देख्न सक्नुहुनेछ जसले साइटमा भ्रमण गरेको थियो विशिष्ट मितिमा र उनीहरूले कसरी समय अवधिमा व्यवहार गरे।
कोहोर्ट आकार - यसले दिन, हप्ता, वा महीनाहरु द्वारा कोहोर्टको आकारमा परिवर्तनलाई जनाउँछ। कोहोर्ट साइजको आधारमा तपाईको रिपोर्ट कन्फिगर गर्दा तपाईले कति पर्यटकहरू जनवरीमा भ्रमण गर्नुभयो र फेब्रुअरीको महिनामा फर्कनुभयो भनेर पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। कोहोर्ट साइज छनौट गर्दा, तपाईं हप्ताको आकार छनौट गर्दा सात, १ of, २१, वा days० दिनको मिति दायरा चयन गर्न सक्नुहुनेछ।
मेट्रिक - यो केवल एक कुरा जुन तपाईं मापन गर्न खोज्नुहुन्छ। यस समयमा, मेट्रिक्सले प्रति प्रयोगकर्ता रूपान्तरण, पृष्ठ आगन्तुक प्रति दृश्य, अतिथिको लागि सत्रहरू, प्रति ग्राहक विचार, प्रयोगकर्ता प्रतिधारण, लक्ष्य पूरा हुने, रूपान्तरण, आदि समावेश गर्न सक्दछ। तपाईंको अवधारण दरको सफलताको निर्धारण गर्दा सबै काम गर्न सकिन्छ।
मिति दायरा - यस संग, तपाईं दिन, हप्ता, र महिनाहरु मा आफ्नो सह आकार मा निर्भर गर्दछ मिति दायरा भिन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको लागि यो पनि सम्भव छ विभिन्न विश्लेषकमा विश्लेषणहरू। उदाहरण को लागी, तपाइँ एक डेस्कटप कम्प्यूटर को उपयोग गरी आगंतुक बनाम एक मोबाइल उपकरणमा आगन्तुकहरु को लागी औसत सत्र समय हेर्न सक्नुहुनेछ। वा, तपाईले नयाँ आगन्तुक अधिग्रहणको आधारमा रिपोर्टलाई निश्चित हप्तामा कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै क्रिसमस २०१। अघिल्लो हप्ता। यसो गर्नाले तपाइँको वेबसाइटका आगन्तुकहरूले डेस्कटप कम्प्युटरको प्रयोग गरेर साइटमा अधिक समय बिताउँदछन्, विशेष गरी क्रिसमस भन्दा अघि।
कोहोर्ट विश्लेषण पहिलो पटक बुझ्न कत्ति गाह्रो छ भने निराश नहुनुहोस् किनभने तपाईं समय संग पकड हुनेछ। यो एक धेरै उपयोगी सुविधा हो कि तपाईको गुगल एनालाइटिक्स उपकरण मार्फत प्रयोगकर्ताको ढिलाइ प्रतिक्रिया विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ। यो तथ्या data्क डाटा कटौतीले तपाईंलाई तपाईंको वेबसाइटमा नयाँ आकर्षक परिवर्तनहरू र / वा मोबाइल अनुप्रयोगलाई राम्रो रूपान्तरणको लागि मद्दत गर्न सक्दछ।
टैग: विश्लेषणcohortसमूह विश्लेषणGoogle विश्लेषणगुगल एनालिटिक्स कोहोर्ट विश्लेषणकोहोर्ट विश्लेषण के हो
ग्राहक सामना गरिरहेका उपकरणहरू र कसरी तपाईं उनीहरूसँग मार्केट गर्न सक्नुहुन्छ
मई 15, 2015 मा 5: 58 एएम
मोबाइल अनुप्रयोगको लागि तपाईले यसमा देखाईएको उदाहरण। यो कुन अनुप्रयोग हो?
कोहोर्ट विश्लेषणको बारेमा हामीलाई व्याख्या गर्न तपाईंको समयको लागि धेरै धन्यवाद शेन। यो साँच्चिकै राम्रो पढिएको थियो! हामीले यस कोहोर्टको बारेमा सोध्ने केही ईमेलहरू प्राप्त गर्‍यौं तर अब हामी तिनीहरूलाई तपाईंको लिंक can दिन सक्छौं
मई 13, 2016 मा 1: 18 एएम
राम्रोसँग वर्णन गरिएको!